र, त्यसपछी फिल्म नहेर्ने कसम खाएँ – लालबाबु पण्डित मन्त्री,सामान्य प्रशासन – Mero Film
र, त्यसपछी फिल्म नहेर्ने कसम खाएँ – लालबाबु पण्डित मन्त्री,सामान्य प्रशासन
लालबाबु पण्डित नामजस्तै क्रान्तिकारी स्वभावका नेताको परिचय हो । राजनीति गरेर राजनीतिक मात्र होइन, उच्च सामाजिक व्यक्तित्वसमेत बनाएका उनको नाम सुन्नेबित्तिकै मानिसको जिउमा काँडा उम्रन्छ । किनकि, उनी समाज परिवर्तनमा बोलेको पूरा गर्ने, अडिग र जुझारु नेताको स्वभावले परिचित छन् । राम्रो मात्रै, देखिने काम गरेर पहिलोपटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बाहिरिँदा नै उचो सामाजिक व्यक्तित्व बनाएका उनी अहिले पनि चर्चित मन्त्रीमा गनिन्छन् । नेताको नाम सुन्नेबित्तिकै नाक घृणाभावले नाक खुम्च्याउनेहरु पनि यो नाम सुन्दा गर्व गर्छन् ।
कार्टुनिस्ट: अभिषेक दास
सर्लाहीमा जन्मिएर पश्चिम पाल्पामा हुर्किएका पण्डितले २०७४ को संसदीय चुनावमा मोरङबाट कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालालाई पराजित गरे । सरकारी जागिर पनि खाने, अमेरिकाको ग्रिन कार्डदेखि अन्य मुलुकका पीआर पनि बोक्ने कर्मचारी तह लगाउने शासकका रुपमा उनको अग्लो पहिचान छ ।
लालबाबुको जीवनमा न थकान भन्ने शब्द छ, न मनोरञ्जन । मनोरञ्जन लिन न फुर्सद हुन्छ, न प्राथमिकतामै पर्छ उनको । यदाकदा मनोरञ्जक कार्यक्रममा झुल्किँदा त्यसको परख लिन भने चुक्दैनन् उनी । लालबाबु फिल्म सम्बन्धी कार्यक्रममा कमै मात्र उपस्थित हुन्छन् । घर बस्दा पढ्न रुचाउने उनको पहिलो फिल्म हेराइको किस्सा निकै रोचक छ । ‘स्कुल र क्याम्पस पढ्दा म फिल्म हेर्थें । मैले ‘चिराग कहाँ रोशनी कहाँ’ भन्ने फिल्म ९ दिनसम्म हेरेको छु,’ उनले सम्झिए, ‘युद्धको कथामा रहेको त्यो फिल्ममा राजेन्द्र कुमारको डबल रोल छ, क्रान्ति र समाज परिवर्तनको कुरा छ ।’ आन्दोलनताका त्यो पनि नौनौपटक हेरेको फिल्म उनी कहिल्यै बिर्सन्नन् ।
क्रान्तिकारी विचारधाराका फिल्ममा रुचि राख्ने उनी पछिल्लोपटक आमिर खान र माधुरी दीक्षित अभिनित फिल्म ‘दिल’ हेर्न हल छिरेका रहेछन् । पार्टीको काममा सक्रिय एउटा नेताले प्रेमकथाको फिल्म हेर्नु आफैंमा आश्चर्य थियो । ‘०४८ सालको चुनाव जितेपछि घरबेटीसँग ‘दिल’ हेर्न जलजला हल गएको थिएँ,’ उनले सुनाए, ‘हलमा हामीभन्दा अगाडि एक जना किसान थिए । उनले मलाई ‘तपार्इं पण्डितजी हो ?’ भनेर सोधे । मैले ‘हो’ भनेँ । उनले त्यसपछि पनि झन्डै १२ पटकसम्म त्यही प्रश्न सोधिरहे । म हलमा नजाने मान्छेलाई त्यहाँ देख्दा ती किसान त हाफमाइन्ड नै भएछन् । त्यो देखेपछि म कहिल्यै फिल्म हेर्न गइनँ ।’ उनी त्यस दिन चुनावी थकान मेट्न घरबेटीकै सल्लाहमा उनीसित हल पुगेका थिए । रोमान्टिक फिल्म हेर्न । उनलाई देखेर ती किसान किन त्यति अचम्मित भए होलान् ?
लालबाबु अनुमान गर्छन्, ‘सायद भर्खर चुनाव जितेको सांसद यसरी समय बिताउँदा रहेछन् भन्ने पर्यो होला कि ? उनले जुन कुरा मलाई सोधे । त्यसले मलाई नै नराम्रो लाग्यो र मैले त्यसपछि हलमा जान्नँ भन्ने निर्णय लिएँ ।’ त्यसयता उनी फिल्म हेर्नै भनेर टिकट काटेर कुनै हल छिरेका छैनन् । प्रिमियर वा प्रमोसन सोमा अतिथिका रुपमा कसैले सम्झिए पुग्छन् । नत्र हल उनका लागि बिरानो बनिसक्यो । उनले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जीवनीमा आधारित फिल्म हेरेर आफू १५ मिनेट रोएको सुनाए ।
अर्काे हालसालैको रोचक घटना सम्झिरहन्छन् उनी । फिल्म ‘राज्जारानी’ को तराई प्रमोसनमा उनलाई विराटनगर बोलाइएछ । त्यहाँ फिल्मका कलाकार केकी अधिकारी र नाजिर हुसेनले उनलाई स्टेजमै नचाइदिएछन् । लालबाबु मज्जाले नाचिदिए । त्यसले उनलाई कति मनोरञ्जन दियो थाहा छैन, दर्शकले भने खुब मनोरञ्जन लिएको उनले देखे । ‘मलाई आयोजकले प्रिमियरमा हजुरले फिल्म हेर्दा चल्छ, तपाई पपुलर हुनुहुन्छ भनेर बोलाउँछन्,’ लालबाबुले भने । उनलाई अरुभन्दा राष्ट्रिय गीत मन पर्छ । ‘बनेको छ छहराले…’ खुब राम्रो लाग्छ, भने, ‘आहा वनमा फुल्यो फूलै फूल’ म पढेको स्कुलमा खिचिएको गीतले स्कुलको याद दिलाउँछ ।’
लालबाबुले एसएलसी पास गरेपछि इन्जिनियरिङ पढे र जेलबाटै ब्याचलर पास गरे । बाल्यकालमा उनी गुच्चा खेलेर मनोरञ्जन लिन्थे । भोगटेको फुटबल खेल्थे, बाघचाल र डण्डीबियोमा रमाउँथे । ‘डण्डीबियोले आँखा फुट्छ भन्ने लागेर त्यो खेल अलि कम खेलियो,’ उनले सम्झिए । फुर्सदमा किताब पढ्नेबाहेक टेलिभिजन हेरेर समय बिताउँछन् । ‘अलिकति फुर्सद भयो भने खासगरी भारतीय टेलिसिरियल सीआइडी हेर्छु । यो सिरियल मलाई निकै सन्देशमूलक लाग्छ । म डिस्कभरी च्यानल हेर्छु र फेसबुकमा यस्तै कुरा सेयर गर्छु,’ उनले खुलाए ।
२०७५ वैशाख ६ गते ११:५३ मा प्रकाशित
थारु गीत ‘ओ सजन’ मा पल र कविताको फिचर्ड
गायिका विष्णु माझीको नयाँ गीत ‘दशैँ–तिहार आइसक्यो’
शम्भु राईको ‘झिल्के साडी’ सार्वजनिक
‘कालो कोट’ मा फेरि सहकार्य गर्दै रोहित र दीपक–दीपा समूह, सौगात मल्ल भिलेनको भूमिकामा
माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवेमा गायिका जोशीको सरप्राइज इन्गेजमेन्ट (फोटो फिचर)
अभिनेता जगनूरको निधन
अभिनेत्री निकोल रिचीको जन्मदिनमा जब कपालमा आगो लाग्यो…